Tababaraha xulka Argentina oo ka hadlay kulanka ay ku wajahayaan Brazil final-ka Copa America – Gool FM
Tababaraha xulka Argentina oo ka hadlay kulanka ay ku wajahayaan Brazil final-ka Copa America
Dajiye July 7, 2021
(Brazil) 07 Luulyo 2021. Tababaraha xulka qaranka Argentina ee Lionel Scaloni ayaa sheegay in dalkiisa u qalmay inuu u soo baxo final-ka Copa America, isla markaana uu ku taamayo inuu ka adkaado Brazil oo ah dalka ay sida weyn ugu xafiiltamaan kubadda cagta Argentina.
Xulka qaranka Argentina ayaa gaaray mar kale fiinaalka Copa America 2021 kaddib markii uu wareegga afar-dhammaadka ku dhaafay xulka Colombia.
Si kastaba ha ahaatee, xulka Argentina ayaa fiinaalka Copa America 2021 la ciyaari doona xulka Brazil aroornimada Axadda ama saacadaha dambe ee habeenka Sabtida sii baxeyso taariikhduna ay ku beegan tahay 11-ka July.
Haddaba Lionel Scaloni oo ka soo muuqday shir jaraa’id ayaa wuxuu yiri:
“Inaan gaarno finalka dadaal badan ayaa nooga baxay, waana inaan ku raaxeysanaa taasi, ciyaartoydu waxay diirada saareen ku dhawaad 60 maalmood ujeedkan.”
“Waxaan aaminsanahay in Argentina ay tahay inay marwalba tartanto iyadoo kulammada oo dhan ay adag yihiin, waxay noogu ciyaarayaan qaab ka duwan taasna waa mid aad u adag.”
Scaloni ayaa sidoo kale amaanay qaab ciyaareedkii Lionel Messi ee kulankii Colombia, isagoo ku tilmaamay inuu u qalmo inay kor ugu qaadaan koofiyahooda isaga dartiis, qof walbana uu ku faano.
Ugu dambeyntii Tababaraha xulka qaranka Argentina ee Lionel Scaloni ayaa ka hadlay kulanka final-ka Copa America ay kula ciyaari doonaan Brazil:
“Inta badan kuwa ciyaara finalka waa kuwa u qalma, Argentina si cadaalad ah ayey ku gaadhay himiladeeda.”
“Waxaan kula ciyaari doonnaa finalka kooxda waligeed uu xilfaltan unaga dhaxeeyay, .Brazil waa tan waligeed ee nala tartanta, waxaan nahay labada koox ee ugu awooda badan Koonfurta Ameerika, marka waxaan rajeyneynaa in dadku ku raaxeysan doonaan kulankaan, Dabcan waxaan dooneynaa inaan guuleysano waana rajeynaynaa.”
Jose Mourinho oo markale soo jeediyay dareenka warbaahinta isagoo xerada tababarka ku yimid Mooto Vespa...+ (SAWIRRO)
RASMI: Mario Balotelli oo ku biiray Koox ka dhisan dalka Turkiga